Shiinaha guddi inwole inwole la eva soosaarka iyo Warshad | Wode
Nonwoven guddiga insole la eva
1.Nonwoven guddi insole la Eva inta badan loo isticmaalo Samaynta insole kabaha.
Isticmaalka : Kabo Insole
Dhumucdiisuna: Fiber insole guddiga: 0.9MM ~ 3.0MM
Cabir: Xaashida 0.914M x 1.37M iyo 1.00M x 1.50M
Midab : Eva midab kastaaba waa hagaag!
Gule : Super gule ama latex cad.
Qalabka: Fiber insole board waxaa laga sameeyaa fiber wanaagsan, cadaan ah oo aan laga badinin.
Macluumaad dheeri ah oo alaab ah :
xajmiga xajmiga 20ft
1.0MM + 1.5MM 1.0MX 1.5M 6400 Waraaqo
1.5MM + 2.0MM 1.0MX 1.5M 4550 Waraaqo
2.0MM + 2.0MM 1.0MX 1.5M 4000 Waraaqo
Dekedda rarka: Xiamen, Shiinaha
1. Xaashida, 25 xaashi halkii polybag iyo bannaanka oo wata baco adag.
2. waxaa lagu buuxin karaa santuuq alwaax ah.
4, Waqtiga la bixinayo: 7 ilaa 15 maalmood gudahood oo loogu talagalay weelal buuxa
5, Shuruudaha Bixinta: T / T, L / C ama D / P. lacagaha kale waa la heli karaa, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
6, Delivery Port: Xiamen Port, Fujian
1.Waa waarayaa, qaab kusocota, ha ureynin.
2.Waxaad ufiican tahay caafimaadka qofka, Caawinta wareegga dhiigga qofka.
3.Wearble, hawo wanaagsan, Deegaanka u habboon, nadaafad leh. (cillado ma laha heerkulka sare)
4.Nafka u adkaysta, Hayso qalalan (qoyaan la'aan), cagaha kala firidhsan dhididka si kor loogu qaado raaxada cagta.
3. Daabacaadda adeegyada Logo
Muunado bilaash ah ayaa la heli karaa markaad codsato. sida ku xusan baaritaankaaga.
2. Haddii aad gacanta ku hayso muunad kuu gaar ah, waanu nuqulan karnaa ka dib markaan hubinno tayada tusaalahaaga.
badeecadaha, waxaan u soo diri doonnaa sawir xamuul ah jeegga macaamiisha.
3.Waan ku daabacan karnaa astaanta sabuuradda, waxaan haynaa astaanteena "EUROTEX333".
5. Faa'iidada Warshaddeena:
1.Waxaan marwalba u hogaansanahay tayada xasilloon, qiimaha macquulka ah, gaarsiinta waqtiga shaqada ee horumarinta shirkadda. Waxaan ku adag nahay tayada waxaanna ka gudubnay shahaadada nidaamka tayada ISO9001.
2.Waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican ee aan ku qancin karno baahida macaamiisha, waxaa la aasaasay muddo dheer iyo xiriir iskaashi saaxiibtinimo oo lala yeesho macaamiishayada gudaha iyo shisheeyaha sanado badan.
Shirkaddayadu waxay la jaanqaadeysaa fikradda ah "qalabka WODE, dammaanadda tayada", waxayna ku saleysan tahay "hubinta tayada, qiimaha macquulka ah, keenista degdegga ah, adeegga wanaagsan" mabda'ayada
A: Waxaan nahay warshad iyo soo saare asal ah oo kuyaala goobta la dareemay.
2. Waa maxay waqtiga tijaabadaagu?
J: Caadi ahaan, 3-5 maalmood oo shaqo ah.
3.Wadkee ayaad u rartaa?
J: Shixnad xawaare ah, hawo & bad, waxay kuxirantahay baahidaada.
Miyaad aqbashaa amarka OEM ama ODM?
A: Waxaan aqbalnaa OEM iyo ODM oo leh astaanta macaamiisha iyo qaabeynta xirmooyinka.
5.Ma alaabadaadu ka samaysan tahay alaabta deegaanka?
Dhammaan alaabooyinkayagu waa kuwo deegaanka u habboon.
6.Waxaan kaliya u baahanahay tiro yar, ma aqbali kartaa?
J: Haa, waanu aqbalnaa amar yar oo imtixaan ah.
7: Muunad ma ka qaadaa?
J: Muunadaha keydka ku jira waxaa lagu bixin karaa bilaash waxaana lagu geyn karaa 1 maalin iyo lacagta dirista waxaa bixin doona macmiilka.
Shuruudo kasta oo gaar ah oo sambal ah, iibsadayaashu waxay u baahan yihiin inay bixiyaan khidmadda ku habboon.
Si kastaba ha noqotee, khidmadda muunadda ayaa loo celin doonaa macaamilka ka dib amarro rasmi ah.
Hore: Guddiga lugaha ee 'Antistatic insole'
Xiga: Xaashida halbeegga xaashida leh eva
Guddiga Insole ee Antistatic Nonwoven Insole
Midabo Gudbin Insole ah
Gudiga Insole Nonwoven
Nonwoven Insole Board Kabo
Gudiga Insole ee aan Xirfad Laheyn Eva
Nowoven Insole ee Kabaha Isboortiga
Waxyaabaha Kabaha ee Gudiga Insole ee aan la Goyn
Biyaha-Resistand Gudiga Inwole Nonwoven ee Kabaha
Guddiga Insole Nonwoven Nonwoven
Xaashida halbeegga xaashida leh eva
Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Kabaha Xaashida Insole, Guddiga Insole oo leh Eva,